Inqubomgomo Yobumfihlo - EasyBiz | I-Mileage Tracker App
Khuphela kwi-IOS / Apple
Khuphela kwi-Android / Google
Umhla ophumelelayo: Meyi 25, 2019
I-EasyBiz Mileage Tracker ("us" "," thina ", okanye" yethu ") isebenza kwi-application ye-EasyBiz Mileage Tracker yesicelo sefowuni (apha ebizwa ngokuba yi" iNkonzo ").
Eli phepha likukwazisa ngemigaqo-nkqubo ngokuphathelele ukuqokelela, ukusebenzisa kunye nokudalulwa kwedata yakho xa usebenzisa iNkonzo yethu kunye nezigqibo ozidibene nalo datha.
Sisebenzisa idatha yakho ukubonelela nokuphucula iNkonzo. Ngokusebenzisa iNkonzo, uyavuma ukuqokelela nokusetyenziswa kolwazi ngokuhambelana nalo mgaqo-nkqubo. Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela kule Mgaqo-nkqubo weNgcaciso, imigaqo esetyenziswe kule Mgaqo-nkqubo weNgcaciso inentsingiselo efanayo kunye neMigomo neMibandela yethu.
Inkonzo yi-EasyBiz Mileage Tracker yesicelo seselula esetyenziswa yi-EasyBiz Mileage Tracker
Iingxelo zomntu zithetha idatha malunga nomntu ophilayo onokuqatshelwa kwizo nkcukacha (okanye kulawo kunye nolunye ulwazi kunye nokuba sinakho okanye sinokungena kwifa lethu).
Idatha yokuSebenza yidata eqokelelwa ngokuzenzekelayo okanye eyenziwa ngokusetyenziswa kweNkonzo okanye kwiziseko zesevisi ngokwazo (umzekelo, ubude beetyeleli lephepha).
Iikhukhi ziifayile ezincinci ezigcinwe kwisixhobo sakho (ikhompyutheni okanye ifowuni yeselula).
Umlawuli weDatha uthetha umntu ongokwemvelo okanye womthetho (mhlawumbi yedwa okanye ngokubambisana okanye ngokufanayo nabanye abantu) unquma iinjongo zendlela kunye naluphi na ulwazi oluthile, okanye luya kulandelwa.
Ngenjongo yalo Mgaqo-nkqubo weMfihlo, singumlawuli weData weDatha yakho.
Iinkcukacha zeProgram (okanye ababoneleli ngeNkonzo)
Inkqubo Yenkcukacha (okanye uMboneleli weNkonzo) uthetha nawuphi na umntu ongokwemvelo okanye womthetho owenza idatha egameni loMlawuli weDatha.
Singasebenzisa iinkonzo zababoneleli ngeeNkonzo ezahlukeneyo ukwenzela ukucwangcisa idatha yakho ngempumelelo.
Isihloko Senkcukacha (okanye Umsebenzisi)
Isihloko soDatha naluphi na umntu ophilayo osebenzisa iNkonzo yethu kwaye siyiNtloko yeDatha.
Siqokelela iintlobo ezahlukeneyo zolwazi ngeenjongo ezahlukeneyo ukubonelela nokuphucula inkonzo yethu kuwe.
Iintlobo zeDatha eziqokelelelweyo
Ngethuba usebenzisa i-Service yethu, sinokukucela ukuba unikeze ngolwazi oluthile olunokuthi lunokusetyenziswa ukuqhagamshelana okanye ukukuchonga ("Idatha Yomntu"). Ulwazi oluchongiweyo lomntu lungabandakanya, kodwa alukhawulelwanga:
Igama lokuqala negama lokugqibela
Ikhukhi kunye nedatha yokusetyenziswa
Xa ufinyelela kwiNkonzo ngefowuni yeselula, sinokuqokelela ulwazi oluthile ngokuzenzekelayo, kubandakanywa, kodwa kungaphelelwanga, uhlobo lwesicatshulwa esisetyenziswayo, i-ID yakho yesistim ekhethekileyo, idilesi ye-device yeselula yakho, inkqubo yakho yokusebenza yeselula , uhlobo lwesiphequluli se-Intanethi esisebenzisayo, izixhobo ezikhethiweyo zeefowuni kunye nolunye ulwazi lwe-diagnostic ("Idatha yokuSebenza").
Singasebenzisa nokugcina ulwazi malunga nendawo yakho xa usinika imvume yokwenza njalo ("Indawo yeDatha"). Sisebenzisa le datha ukubonelela iinkonzo zeNkonzo yethu, ukuphucula nokwenza iNkonzo yethu.
Unokwenza okanye ukhubaze iinkonzo zendawo xa usebenzisa iNkonzo yethu nganoma naliphi ixesha ngendlela yesetyenziso sakho.
Ulandelelwano kunye neCookies Data
Sisebenzisa ii-cookies kunye nobuchwepheshe bokulandelela okufanayo ukulandelela umsebenzi kwiNkonzo yethu kwaye sineenkcukacha ezithile.
Ikhukhi zifayili kunye nenani elincinane lwedatha elingabandakanya isihlomelo esingachazwanga. Ikhukhi zithunyelwa kwisiphequluli sakho kwiwebhusayithi kwaye zigcinwe kwisixhobo sakho. Olunye ubuchwepheshe bokulandelela lusetyenziswa njengama-beacons, ithegi kunye neempendulo zokuqokelela nokulandelela ulwazi kunye nokuphucula nokuhlalutya inkonzo yethu.
Unokuyalela umkhangeli wakho ukuba unqabe yonke ikhukhi okanye ukubonisa xa i-cookie ithunyelwa. Nangona kunjalo, ukuba awuwamukeli ikhukhi, awukwazi ukusebenzisa ezinye iinxalenye zeNkonzo yethu.
Imizekelo ye Cookies esiyisebenzisayo:
Cookies zeSession. Sisebenzisa iiCoco zeSession ukuqhuba iNkonzo yethu.
Cookies ezikhethiweyo. Sisebenzisa iiKhokhi ezikhethiweyo ukukhumbula izikhetho zakho kunye nezicwangciso ezahlukeneyo.
Cookies yoKhuseleko. Sisebenzisa iiKhuseleko zeKhuseleko kwiinjongo zokukhusela.
I-EasyBiz Mileage Tracker isebenzisa idatha eqokelelwe ngeenjongo ezahlukeneyo:
Ukubonelela nokugcina inkonzo yethu
Ukukwazisa malunga noshintsho kwiNkonzo yethu
Ukukuvumela ukuba uthathe inxaxheba kwiimpawu ezibandakanyekayo zeNkonzo yethu xa ukhetha ukwenza njalo
Ukubonelela ngenkxaso yabathengi
Ukuqokelela uhlalutyo okanye ulwazi oluxabisekileyo ukuze sikwazi ukuphucula inkonzo yethu
Ukubeka iliso ukusetyenziswa kweNkonzo yethu
Ukufumana, ukuthintela nokulungisa imiba yobuchwepheshe
Isiseko somthetho sokuCwangcisa iinkcukacha zomntu phantsi koMgaqo-jikelele woKhuselo loLwazi (GDPR)
Ukuba uvela kwi-European Economic Area (EEA), i-EasyBiz Mileage Tracker esemthethweni siseko yokuqokelela kunye nokusebenzisa ulwazi oluthile oluchazwe kule Mgaqo-nkqubo weNgcaciso kuxhomekeke kwiiNkcukacha zoBuntu esiziqokeleyo kunye nomxholo othile apho siqokelela khona.
I-EasyBiz Mileage Tracker inokucwangcisa iinkcukacha zakho zoBuntu ngenxa yokuba:
Sidinga ukwenza isivumelwano kunye nawe
Usinike imvume yokwenza njalo
Ukuqhutyelwa kwimiba yethu esemthethweni kwaye ayinakugqithiswa ngamalungelo akho
Injongo yokucwangcisa intlawulo
I-EasyBiz Mileage Tracker izakugcina iiNkcukacha zakho zoBuntu kuphela nje kuphela xa kuyimfuneko kwiinjongo ezibekwe kule Mgaqo-nkqubo Wobumfihlo. Siza kugcina kwaye sisebenzise iiNkcukacha zakho zoBuntu ngokusemgangathweni oluyimfuneko ukuthobela iimbopheleleko zethu zomthetho (umzekelo, ukuba sifuna ukugcina idatha yakho ukuthobela imithetho efanelekileyo), ukulungisa iingxabano nokunyanzelisa izivumelwano zethu nemigaqo.
I-EasyBiz Mileage Tracker iya kugcina kwakhona uLawulo lokuSebenza ngeenjongo zokuhlalutya kwangaphakathi. Idatha yokusetyenziswa ngokuqhelekileyo igcinwa ixesha elifutshane, ngaphandle kokuba le data isetyenziselwa ukuqinisa ukhuseleko okanye ukuphucula ukusebenza kweNkonzo yethu, okanye sibophelelwe ngokomthetho ukugcina le datha ixesha elide.
Ulwazi lwakho, olubandakanya uLwazi LwaBantu, lunokudluliselwa kwi-computer kwaye lugcinwe - kwaye lugcinwe kwiikhompyutheni ezingaphandle kwelizwe lakho, iphondo, ilizwe okanye olunye ulawulo lommandla apho imithetho yokukhuselwa kwedatha ingahluka kwalawo olawulo lwakho.
Ukuba uhlala ngaphandle kwe-United States kwaye ukhethe ukunikezela ngolwazi, nceda uqaphele ukuba siyadlulisa idatha, kuqukwa neDatha Idatha, e-United States kwaye siyayisebenzisa apho.
Imvume yakho kule Mgaqo-nkqubo Wobumfihlo elandelwa ukuthumela kwakho olo lwazi limela isivumelwano sakho kuloo dluliselo.
I-EasyBiz Mileage Tracker iya kuthatha onke amanyathelo afunekayo ukuqinisekisa ukuba idatha yakho iyaphathwa ngokukhuselekileyo kwaye ngokuhambelana nale Mgaqo-nkqubo Wobumfihlo kwaye akukho tshintshelo lweenkcukacha zakho eziza kubakho kwiintlangano okanye ilizwe ngaphandle kokuba kukho ukulawulwa okwaneleyo kwindawo kuquka ukhuseleko lweedatha yakho kunye nolunye ulwazi lomntu.
I-EasyBiz Mileage Tracker ingachaza iinkcukacha zakho zoBuntu ngokholo olukholelwa ukuba isenzo esinjalo simfuneko ukuba:
Ukuthobela uxanduva lomthetho
Ukukhusela nokukhusela amalungelo okanye impahla ye-EasyBiz Mileage Tracker
Ukuthintela okanye ukuphanda ukungalunganga okukhoyo malunga neNkonzo
Ukukhusela ukhuseleko lwabasebenzisi beNkonzo okanye uluntu
Ukukhusela ukunyanzeliswa komthetho
Ukhuseleko lwedata yakho lubalulekile kithi kodwa khumbula ukuba akukho ndlela yokudluliselwa kwi-intanethi okanye indlela yokugcina i-elektroniki yi-100% ikhuselekile. Nangona silwela ukusebenzisa iindlela ezamkelekileyo zorhwebo ukukhusela iZiko Lakho Lwabantu, asikwazi ukuqinisekisa ukukhuselwa kwayo ngokupheleleyo.
Amalungelo akho okukhusela iiNkcukacha phantsi koMgaqo-jikelele woKhuselo loLwazi (GDPR)
Ukuba ungumhlali we-Economic Area (EEA), unamalungelo athile okukhusela idatha. I-EasyBiz Mileage Tracker ijolise ukuthatha amanyathelo afanelekileyo okukuvumela ukuba ulungise, ulungise, ususe okanye unciphise ukusetyenziswa kweedatha zakho zomntu.
Ukuba unqwenela ukwaziswa malunga neNkcukacha zoBuntu esinazo malunga nawe kwaye ukuba ufuna ukuba zisuswe kwiinkqubo zethu, nceda uqhagamshelane nathi.
Kweemeko ezithile, unamalungelo alandelayo okukhusela idatha:
Ilungelo lokufikelela, ukuhlaziya okanye ukususa ulwazi esinalo kuwe. Naliphi na eyenzekayo, unako ukufikelela, ukuhlaziya okanye ukucela ukususwa kweedatha zakho ezizodwa ngqo kwicandelo locwangciso lwe-akhawunti. Ukuba awukwazi ukwenza ezi zinto, nceda uqhagamshelane nathi ukuncedisa.
Ilungelo lokulungiswa. Unelungelo lokuba ulwazi lwakho lulungiswe ukuba olo lwazi luchanekanga okanye aluphelelanga.
Ilungelo lokuchasa. Unelungelo lokuchasa ekusebenziseni iinkcukacha zakho.
Ilungelo lokuthintela. Unelungelo lokucela ukuba sinqande ukucwangciswa kolwazi lwakho lomntu.
Ilungelo lokuphatheka kwedatha. Unelungelo lokubonelelwa ngekopi yolwazi esinalo kuwe kwifomathi ehleliweyo, efundeka ngomshini kwaye isetyenziswa ngokuqhelekileyo.
Unelungelo lokurhoxisa imvume. Unelungelo lokurhoxisa imvume yakho nanini na apho i-EasyBiz Mileage Tracker incike kwimvume yakho yokucwangcisa ulwazi lwakho lomntu.
Nceda uqaphele ukuba sinokukucela ukuba uqinisekise ubungqina bakho ngaphambi kokuba uphendule kwizicelo ezinjalo.
Unelungelo lokukhalaza kwiGunya loKhuseleko loLwazi malunga nokuqokelela kunye nokusetyenziswa kweedatha zakho. Ukufumana ulwazi oluthe vetshe, nceda uqhagamshelane negunya lakho lokukhusela idatha kwiNgingqi Yomnotho YaseYurophu (EEA).
Singasebenzisa iinkampani zenkampani yesithathu kunye nabantu ngabanye ukulungiselela inkonzo yethu ("Ababoneleli ngeNkonzo"), sinike iNkonzo egameni lethu, senze iinkonzo ezinxulumene neNkonzo okanye sincedise ukuhlalutya indlela iNkonzo yethu isetyenziswa ngayo.
Lawa maqela asithathu afumaneka kwiiNkcukacha zakho zomntu kuphela ukwenza le mi sebenzi egameni lethu kwaye unyanzelekile ukuba angabonakali okanye awisebenzise nayiphi na injongo.
Sinokusebenzisa ababoneleli ngeenkonzo zenkampani yesithathu ukujonga nokuhlaziya ukusetyenziswa kweNkonzo yethu.
I-Google Analytics yinkonzo ye-analytics yewebhu eyenziwa yiGoogle elandelela kunye neengxelo zezithuthi zewebhu. I-Google isebenzisa idatha eqokelelwe ukulandelela kunye nokubeka esweni ukusetyenziswa kweNkonzo yethu. Le datha yabelwe kunye nezinye iinkonzo zeGoogle. I-Google ingasebenzisa idatha eqokelelwe kwiimeko kunye nokuzenza iintengiso zentengiso yayo.
Unokuphuma kwiimpawu ezithile zeGoogle Analytics ngokusebenzisa izicwangciso zedivayisi yakho yeselula, njengezicwangciso zakho zokukhangisa izixhobo okanye ngokulandela imiyalelo ebonelelwe yiGoogle kuMgaqo-nkqubo Wobumfihlo: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa malunga nezenzo zobumfihlo zeGoogle, nceda uvakashele ikhasi lewebhu lewebhu le-Google kunye neMigomo: https://policies.google.com/privacy?hl=en
I-Firebase isevisi ye-analytics enikezwe ngu-Google Inc.
Unokuphuma kwiinkalo ezithile ze-Firebase ngokusebenzisa izicwangciso zedivayisi yakho yeselula, njengezicwangciso zakho zokukhangisa izixhobo okanye ngokulandela imiyalelo ehlinzekwa yi-Google kwimigaqo yabo yobumfihlo: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Siyakukhuthaza ukuba uhlaziye umgaqo-nkqubo weGoogle wokukhusela idatha yakho: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Ukufumana ulwazi oluninzi malunga nolwazi lwengcaciso ye-Firebase, nceda uvakashele ikhasi lewebhu le-Google kunye neMigomo: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Sinokubonelela ngemveliso ehlawulwe kunye / okanye iinkonzo ngaphakathi kweNkonzo. Kwimeko apho, sisebenzisa iinkonzo zenkampani yesithathu ukulungiselela ukuhlawulwa kwentlawulo (umz.
Asiyi kugcina okanye ukuqokelela iinkcukacha zekhadi lakho lokuhlawula. Le ngcaciso inikwe ngokuthe ngqo kubalingisi bethu bokuhlawula imali abasebenzisa ulwazi lwakho lomntu lulawulwa nguMgaqo-nkqubo weMfihlo. Ezi projekthi zentlawulo zihambelana nemigangatho ebekwe yi-PCI-DSS njengoko ilawulwa yiBhunga leMigangatho yeSizwe soKhuseleko, okuyimigudu ehlangeneyo yeempawu ezifana neVisa, MasterCard, eMelika
Veza kwaye Ufumanise. Iimfuno ze-PCI-DSS zinceda ukuqinisekisa ukuphathwa okukhuselekileyo kolwazi lokuhlawula.
Inkqubo yokuhlawula esiyisebenzisayo yile:
Iintlawulo ze-Apple Store kwi-App
Umgaqo-nkqubo wabo wobumfihlo ungabonwa ngaso https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
Inkonzo yethu inokuthi iqulethe iikhonkco kwezinye iisayithi ezingasebenzi. Ukuba ucofa iqhagamshelo lesithathu, uya kuthunyelwa kwisayithi lomntu wesithathu. Sikucebisa ngokukhawuleza ukuba ubuyekeze iMgaqo-nkqubo Yobumfihlo kuyo yonke indawo oyityelelayo.
Asinakho ukulawula kwaye asinakuthatha uxanduva lomxholo, imigaqo-mfihlo okanye iinkqubo zaso nasiphi na isayithi okanye ezinye iinkonzo.
Inkonzo yethu ayilungiseleli nabani ngaphantsi kwe-18 ("Abantwana").
Asiqokeleli ngolwazi ngokuchanekileyo ulwazi oluvela kumntu oneminyaka engaphantsi kwe-18. Ukuba ungumzali okanye umgcini kwaye uyazi ukuba umntwana wakho usinikezele ngeenkcukacha zabantu, nceda uqhagamshelane nathi. Ukuba siyazi ukuba siqokelele iinkcukacha zoBuntu kubantwana ngaphandle kokuqinisekiswa kwemvume yabazali, sithatha amanyathelo okususa loo nkcazelo kumaseva ethu.
Iinguqulelo kule nkqubo yemfihlo
Siya kuphinda sihlaziye iMgaqo-nkqubo Yobumfihlo ngezikhathi ezithile. Siza kukuxelela nayiphi na inguqu ngokuthumela iMgaqo-nkqubo Yobumfihlo kule khasi.
Siza kukuxelela nge-imeyile kunye / okanye isaziso esibalulekileyo kwiNkonzo yethu, ngaphambi kokuba utshintsho lube lusebenza kwaye luhlaziye "umhla osebenzayo" phezulu kule nkqubo Yobumfihlo.
Ukwacetyiswa ukuba ubuyekeze le Mgaqo-nkqubo Wobumfihlo ngezikhathi ezithile nangayiphi na inguqu. Utshintsho kule Mgaqo-nkqubo weNgcaciso uyasebenza xa iposelwe kule khasi.
Ukuba unemibuzo malunga nalo Mgaqo-nkqubo Wobumfihlo, nceda uqhagamshelane nathi:
© 2016 Bateaux Theme. Onke amalungelo agciniwe.